တစ်ပွဲတိုး…….ပန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » တစ်ပွဲတိုး…….ပန်း
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Nov 1, 2013 in My Dear Diary, Short Story | 36 comments
ကျနော် အင်တာနက်မှာ စာလိုက်ဖတ်ရင်း အင်းတို့လက်ဖွဲ့ တို့အဆောင်တို့အကြောင်းဖတ်ရင်း ကျနော်သုံးခဲ့ ရတဲ့ပန်းကလေးကို အမှတ်တမဲ့သတိရသွားတာပါ….။ လက်ဝှေ့ ထိုးတာတို့ မျက်နှာပွင့်တို့ မှာ.ဆရာက အဆောင်တွေ ဘာတွေ ပေးရင် တစ်ပွဲတိုး
လက်ဖွဲ့ လေးတွေ၊ ပန်းလေးတွေ၊ ဆေးလိပ်တွေ ပေးတာတော့ အရင်က ကြားဘူးပါတယ်…။
ကျနော့်ရဲ့ တစ်ပွဲတိုးပန်းက ဘယ်ဆရာကမှ စီရင်ပေးတာလဲ မဟုတ်သလို ….ဘာအဆောင်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ…။
ကျနော့်ဘ၀မှာလည်း ရံခါဖန်ခါ ကပ်သီးကပ်သတ် ကြုံရတာလေးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်…။
အဲဒါတွေ ထဲက တစ်ခုပေါ့ဗျာ…။ဖြစ်ပုံက ဒီလို….။
အလည်သွားရော…။အလည်သွားတယ် ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ အက ၀တ်စုံကတော့ ပါသွားတာပေါ့…။
ဟိုရောက်တော့လည်း အေးအေးမနေရပါဘူး….သူ့အမ ၀မ်းကွဲရဲ့ အငြိမ့် ဇာတ်လေးမှာ ဧည့်သည်အဖြစ် နှစ်ပါးခွင် တစ်ည
လောက်ကပေးဘို့ ပြောလာတော့ ၀င်ကပေးမယ်လို့ ဂတိပေးလိုက်ပါတယ်….။ သူငယ်ချင်းကို ခင်လွန်းလို့ က ” ပေးမယ်ဆိုပေမယ့်
ကျနော်တို့ ဇာတ်ကြီးမင်းသားတွေက ဒီလို အငြိမ့် ဇာတ်လေးတွေမှာ မက ကြပါဘူး…..။။ အနု ပညာလိုင်းချင်းတူပေမယ့်…..
ရုံပွဲ မင်းသားတွေက နာမည်ထိမ်းရပါတယ်…။ မက လိုကြပါဘူး။။။
ကျနော်ကတော့ မရှိအတူ ၊ နေစားခဲ့ တဲ့ သံယောဇဉ်နဲ့ ကဘို့ လက်ခံလိုက်တာပါ…။
တပ်ကုန်းမြို့ ပေါ်ပွဲ မဟုတ်ဘူး….တပ်ကုန်းမြို့ နယ်ထဲမှာဘဲ….ရွာနာမည်မမှတ်မိတော့ပါဘူး…က”ရမှာကတော့ ဘုန်းကြီးပျံပွဲပါ..။
များလိုက်တဲ့ လူတွေဗျာ….။ ကြက်ပျံမကျပါဘဲ…( စကားမစပ် ပြောရဦးမယ်..ကျနော့်သူငယ်ချင်းလူရွှင်တော် တစ်ယောက်ရှိတယ်…
ကျနော်တို့ မှာ အပြောချိုရတယ် …ကနေတဲ့ ပွဲတိုင်းမှာ နောက်နှစ်တွေမှာလဲ ပွဲတော်ကြီးကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပနိုင်ပါစေ…ဘာညာ
ပေါ့…နောက်ဆုံးညတိုင်းပြောရတာပါ…အဲဒီသူငယ်ချင်း ပေါ့ ၊
နောက်ဆုံးညမှာ “ အခုလို ကပြခွင့်ရတဲ့ အတွက် အရမ်းကို ၀မ်းသာမိပါတယ်…နောက်နှစ်တွေမှာလည်း အခုလိုဘဲ အောင်မြင်စွာ နဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပွဲတော်ကြီးကို ကျင်းပနိုင်ပါစေ”လို့ ဆုတောင်းလိုက်တာ စကားတောင်မဆုံးသေးဘူး…အောက်ကနေ သူ့ ကို ခဲတွေ၊ ပြောင်းဖူးရိုးတွေနဲ့ ဝိုင်းပေါက်ရော…ကျနော့်မှာ ကြားဖြတ်ဝင်ပြီး တောင်းပန်လိုက်ရတာဗျာ….ကိုယ့်လူကမှ မနပ်တာ….
ပွဲဒကာတွေ စိတ်ဆိုးမှာပေါ့….ကျင်းပနေတာက ဘုန်းကြီးပျံပွဲလေ)…
သူဆုတောင်းပုံဆို ရင် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးတွေ…တစ်နှစ်တစ်ပါး….မျက်ခုံးလှုပ်စရာကြီးကိုး)။
ဆက်ရဦးမယ်….ဒါနဲ့ ကရောဆိုပါဆို့ …ပရိတ်သတ်ကလည်းတော်တော်ကို အားပေးပါတယ်….။
သူငယ်ချင်း အမတို့ ပွဲပြီးရင် နောက်ည ဆက်တိုက်ဝင်ကမယ့် ဇာတ်ပွဲကလည်း ကျနော်ကတဲ့ ည မှာ တစ်ညကြိုရောက်နေပါတယ်…။
မြင်းခြံဘက်ကလူတွေဆို သိပါတယ်…သူတို့ လဲ မြင်းခြံနယ်မှာ ဆိုရင်တော့ နာမည်ကြီးတွေပါ…။
ဒါနဲ့နှစ်ပါးသွားပြီးတော့ သူတို့ ညီအကို ရောက်လာပါတယ်…အကူအညီလာတောင်းတာပါ. သူတို့ ညီ အငယ်ဆုံးလေး ( ညီညီအောင်…လို့ ထင်ပါတယ်..သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး) တော်တော်ဖျားနေလို့နှစ်ပါး ခွင် ၀င်ကပေးဘို့အကူအညီတောင်းတာပါ…။
ပရိတ်သတ်ကလည်း နှစ်ပါးမင်းသားဆို ငယ်မှ ကြိုက်တာကိုး…။
နောက်ဆုံး သူငယ်ချင်းကလဲ ၀င်တိုက်တွန်းတော့ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ကူညီမယ်လို့ ကတိ ပေးလိုက်ပါတယ်….။
နောက်နေ့ လည်ကျတော့ မင်းသားခေါင်းပေါင်းကိုလျှော်လိုက်ပါတယ်…ညက ချွေးတွေ သိပ်ထွက်တားတော့ မိတ်ကပ်ချွေးက ခေါင်းပေါင်း အောက်နားလေးတွေမှာ ပေနေရင် ကြည့်မကောင်းဘူးလေ၊ ခေါင်းပေါင်းပန်းတွေကို သပ်သပ်ဖြုတ်ပြီး ဆပ်ပြာနဲ့ သွားတိုက်တံလေးနဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် လျှော်ရတာပါ။ ပြီးတော့ ဇာတ်ခုံ ဘေးနားဘက်က ၀ါးတန်းလေးမှာလှမ်းပြီး စိတ်ချလက်ချ တစ်ချိုးတည်း အိပ်ပစ်လိုက်တာ ညနေ၄း၀၀ လောက်မှ နိုးပါတယ်…။ စားသောက်ပြီးလို့ခေါင်းပေါင်းကို ပြန်ယူတဲ့ အခွ ပြသနာ စ တာပါဘဲ….။
ခေါင်းပေါင်းထိပ်လေးမှာ တန်းရက်လေး ထိုးရတဲ့ နဖူးစည်း ဖော့ပန်းလေးတွေ မရှိတော့ဘူး….နဖူးစည်းပန်းဆိုတာ ခရေပွင့်ပံးစံ ဖော့ပန်းလေးတွေ…အနည်းဆုံး ၁၅ပွင့်လောက်ကို နိုင်လွန်ချည်နဲ့အတန်းလိုက်လေးသွယ်ထားတာ…။
အဲဒါလေး မပါရင် မင်းသားခေါင်းပေါင်း အင်္ဂါရပ် မပြည့်စုံတော့ဘူး…။ခက်ပြီ…..။
ဦးဝင်းကြိုင်တို့ အထဲက လူတွေကိုမေးလဲ မတွေ့ မိဘူးဘဲ၊ ပြောတာပေါ့..။ ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ် ၊ လေတိုက်ပြီးလွင့်သွားရင် ဘယ်လိုသိမှာလဲ…။ ဇာတ်ထဲက ယိမ်းမင်းသားအငယ်လေးတွေဆီမှာ အပို ရှိလားမေးတော့ မရှိကြပါဘူး…အမှန်ဆို အဲဒီပန်းလေးတွေက ဘယ်မင်းသားမှ အပိုမဆောင်ကြပါဘူး….ခေါင်းပေါင်းတစ်လုံးမှာ တစ်ခုဘဲ…၀ယ်ကတည်းက အပြီးတပ်ပြီးသား၊။
ရန်ကုန်မှာ ဆိုရင်တော့ ပြသနာမရှိပါဘူး…ဗိုလ်ချုပ်ဈေးဖြစ်ဖြစ်၊စိန်ဂျွမ်းဈေးဖြစ်ဖြစ် ၀ယ်လို့ ရပါတယ်….ဈေးလည်းမကြီးပါဘူး…။
အခုဟာကနယ်ပွဲ၊ ကပြရမှာကလဲ သူများဇာတ်မှာ ၊ အဖွဲ့ ထဲက လူတွေကလည်း ရန်ကုန်ဇာတ်ကြီးမင်းသားနှစ်ပါးခွင် ၀င်ကပေးမှာဆိုလို့ကိုယ့်ဘဲ အကဲခတ်နေကြတာ…။ ဒီမှာကလဲ..ပြသနာ.။ ဇာတ်ကြီးမင်းသား ခေါင်းပေါင်းက အင်္ဂါ မစုံလို့ တော့ အပြောမခံချင်ဘူး….ပြောခံရမှာလဲ ကြောက်တယ်။
ဟိုမေးဒီမေးနဲ့ ၆နာရီလောက်ရှိနေပြီ…စိတ်လဲညစ်နေပြီ…နောက်မှ ကောင်မလေး တစ်ယောက်က အကြံပေးတယ်…ဘုန်းကြီးပျံပွဲဆိုတော့ ဈေးတန်းကြီးရှိတယ်…အကို ပွဲဈေးတန်းမှာ လိုက်ရှာဝယ်ပါ့လား…လို သတိပေးမှ….ဟာ..ဟုတ်တာဘဲ…တစ်ချို့ ရောင်းတတ်ကြတယ် ဆိုပြီး ပွဲဈေးခင်းမှာ ပါတ်ရှာတာ…တစ်ဆိုင်ဝင် တစ်ဆိုင်ထွက်…။
ပန်းရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေ အများကြီးပါ၊ စက္ကူပန်း၊ ပလပ်စတစ်ပန်း၊ အ၀တ်ပန်း၊ ကြက်မွှေးပန်း အကုန်ရှိတယ်ဗျာ….
ကံမကောင်းချင်တော့ ကျနော်လိုတဲ့ ပန်း တစ်ဆိုင်မှ မရှိဘူး…။ ကိုယ်များ မျက်စိရှန်းနေတာလားဆိုပြီး…တစ်ခေါက်…နှစ်ခေါက်….
အခေါက်ပေါင်းများလို့ ခြေတွေသာ ညောင်းတယ်…လုံးဝမတွေ့ ပါဘူး…။
လူလည်း တော်တော် စိတ်ညစ်နေပြီ…ချွေးတွေ၊သံတွေနဲ့ဖုန်အလူးလူးနဲ့ …ကိုယ့်ဟာကိုလဲ ဒေါသဖြစ်….။
နောက်ဆုံး စိတ်လျှော့လိုက်ရတယ်ဗျာ…။ ဟိုမှာပွဲတောင် စထွက်နေပြီ….ကိုယ့်မှာ မိတ်ကပ်ပြင်ဘို့ နေနေသာသာ…ရေတောင်မချိုးရသေးဘူး..။
နောက်ဆုံး မရတော့မယ့် အတူတူ ခဏ နားမယ်ဆိုပြီး တွေ့ တဲ့ မဏ္ဏပ်မှာ ၀င်ထိုင်လိုက်တာပေါ့….ပွဲခင်းနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆောက်ထားတာပါ….ပွဲခင်းနဲ့ တော့ တော်တော်ဝေးတယ်…။ ဘုန်းကြီးပျံ မဏ္ဏပ်ပါ….တစ်ချို့ ဒကာတွေလဲ ၀ိုင်းဖွဲ့ ထိုင်လို့ …အလွမ်းတွေ သယ်ကြ၊ ဆရာတော် အကြောင်း ပြောကြ နဲ့ ပါ…။အဘိုးကြီးတွေ အဘွားကြီးတွေပါ…။ရေနွေးကြမ်း ၀ိုင်းဖွဲ့ လို့ ပေါ့…။
ကျနော့်ကိုတောင် ရေနွေးသောက်ဘို့ခေါ်ပါတယ်။။။ဒီအချိန်မှာတော့ သိကြားမင်းလာတိုက်တဲ့ ရွှေရင်အေးတောင် မျိုကျမှာ သောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး….။
ဒါနဲ့ လက်မှိုင်ချပြီး ဟိုကြည့် ဒီကြည့်လုပ်နေရင်းနဲ့ ထခုန်မတတ် ၀မ်းသာသွားတယ်ဗျာ….။
ဈေးမကြီးပေမယ့် ၀ယ်လို့ မရတဲ့ ပန်း….
အထွေးလိုက် အပွေ့ လိုက်….တွဲလောင်းချလို့ တစ်မျိုး…..ကွေ့ကာဝိုက်ကာ တစ်မျိုး ။ ပန်းမျိုးစုံတွေကြားမှာမှ…ကိုယ့်ပန်းလေးက ပိုထင်ပေါ်ပြီးလှနေသလိုဘဲ….။နည်းတဲ့ ပန်းတွေလားဗျာ….
ဘုန်းကြီးရုပ်ကလာပ် မှန်အခေါင်းမှာ ဆင်ထားလိုက်ကြတာ..။ ကိုယ့်မှာ ၀မ်းသာရအခက် ၀မ်းနည်းရအခက်…။
ပန်းကိုတက်မက်စိတ်နဲ့ အနီးကပ်ကြည့်လေ၊ မှန်ခေါင်းထဲက ဘုန်းကြီး ရုပ်ကလာပ်ကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရလေ…။
ပန်းကိုတွေ့ ပေမယ့် ရောင်းတာလည်းမဟုတ်၊ တောင်းမယ်ဆိုလဲ ဘယ်သူမှ ပေးမှာ မဟုတ် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းတောင်မသိဘူး…။
နောက်မှ လူရှင်းသွားပြီ…အဘိုးကြီး၊ အဘွားကြီးတွေလဲ ပွဲခင်းကိုသွားပြီဆိုမှ..။
“အရှင်ဘုရား….ကန်တော့ပါတယ်ဘုရား၊တပည့်တော်မှာ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ နေလို့ ကူညီတဲ့ အနေနဲ့ပန်းနဲနဲလောက် စွန့် ပါဘုရား”
လို့ ခွင့်တောင်းပြီး….ရုပ်ကလာပ်ဘေးက ပန်းလေးကို မရဲတရဲ လက်နဲ့ ဆွဲဖြတ်ပေမယ့်…နိုင်လွန်ကြိုးက မပြတ်ပါဘူးဗျာ….။
ဒါနဲ့ “ အရှင်ဘုရား…တပည့်တော်..ပြန်လာပါ့မယ်ဘုရား….ဒီနေရာကို ဘယ်သူမှ ရောက်မလာအောင် ကူညီပေးပါဘုရား” လို့ ပြောပြီး…ပွဲဈေးတန်းကို ပြေးရတာပေါ့…။
ဘုန်းကြီးက ဘာပြန်ပြောမှာလဲ အသက်မှ မရှိတာ….ကိုယ်ကလဲ ဘုန်းကြီး အလောင်းကို ကြောက်တာရယ်….ပန်းယူတာ လူမိသွားမှာ၊ လူတွေ့ မှာ ကြောက်တာရယ်ပေါင်းပြီး….ပါးစပ်ကပြောနေရတာကိုး…။
ပွဲဈေးတန်းမှာ ဘရိတ်ဓါး လိုက်ရှာဝယ်ရတယ်…လိုချင်ပြီဆို…ရှာလို့ တောင်မရဘူးဗျာ…။
ဘရိတ်ဓါးကိုသဲကြီးမဲကြီး လိုက်ဝယ်နေတော့ တစ်ချို့ ဆိုင်တွေက ၊တယ်ပြီး မသင်္ကာသလိုကြည့်ကြသေးတယ်….နောက်မှ
ကုလားဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုမေးတော့ သူကတောင်ပြန်မေးသေးတယ်…။ကြည့် ပါဦးဗျာ မေးပုံက….
“ ခင်ဗျား…ခါးပိုက်နှိုက်လား” တဲ့ …။ ဒေါသဖြစ်လိုက်တာဗျာ….ဒါပေမယ့် စိတ်မဆိုးအားပါဘူး…။
ကျနော့် အခက်အခဲကို ပြောပြမှ…ဒါဆို သူမုတ်ဆိတ်ရိတ်တဲ့ ဓါးအဟောင်းတော့ရှိတယ်..ယူမလားမေးတော့ ကျနော့်မှာ ဟန်တောင် မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး…..။
ဓါးရတာနဲ့ ချစ်သောဘုန်းဘုန်းဆီကို တစ်ခါ ပြန်ပြေးရတာပေါ့…။
ဟိုရောက်တော့ ထပ်ကန်တော့ …ပန်းစွန့် ဘို့ ထပ်ပြော…ကိုယ့်မှာလဲ ရဲရဲ မကပ်ရဲဘူး….။
နောက်ကံဆိုးချင်တော့ အဘိုးကြီး ၂ယောက် ရောက်လာပြီး ဟိုဘက်နားမှာ လာထိုင်နေကြရော…။
အဖော်ရှိတာ ၀မ်းသာပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်စွန့် မလဲ….။
နောက်ဆုံးတော့ ဘေးကကြည့်ရင် ဘုန်းကြီးရဲ့ ငယ်တပည့် လေးမို့အလွမ်းမပြေနိုင်ဖြစ်ပြီး လာငိုသယောင်…ကန်တော့ သယောင်လုပ်ပြီး… ဘုန်းကြီး အခေါင်းဘေးမှာ ပက်လက်လှန်ပြီး အိပ်ချလိုက်ရတာပေါ့…နောက်မှ တွဲလောင်းကျနေတဲ့ ပန်းကလေးကို ဓါးနဲ့ အသာလေး ဖြတ်ရပါတော့တယ်…ပါးစပ်ကလည်းတောင်းပန်လိုက်ရတာ….။ လက်မှာလဲ ဇောချွေးတွေနဲ့ ဆိုတော့
ဓါးကိုင်ရတာလဲ ချော်ချော် ထွက်နေသေးတာ..။
နောက်ဆုံးတော့ ပန်းလေးရသွားပါတယ်..။ ရပြီးတော့ ထပ်ကန်တော့ ပြီးတာနဲ့ဟန်မပျက် မဏ္ဏပ်ထဲက ထွက်လာပြီး…
ဇာတ်ရုံကို အသားကုန်ပြေးတာ…။ နောက်ပြန်တောင် လှည့်မကြည့်ရဲဘူး။(ငယ်တုန်းက ဘုန်းကြီးသရဲက ပိုဆိုးတယ်လို့ ကြားဘူးထားတာကိုး)၊
ဟိုမှာကလည်း မင်းသားပျောက်လို့ လိုက်ရှာနေတာ….။
နောက်ဇာတ်ရုံနောက်မှာဘဲ ရေချိုး…ခေါင်းပေါင်းပြန်ဆင်…ပြီးတော့ မိပ်ကပ်လိမ်း…..။
ကွက်တိလောက်ပါဘဲ…။ ဟိုမှာလဲ ပြဇာတ်ပြီးတော့မှာလေ…။
ဒါနဲ့နှစ်ပါးခွင်ကို ကဖြစ်ခဲ့ တာ….။
ရလိုက်တဲ့ ဆုတွေဗျာ…. တစ်ခြားဇာတ်မင်းသားတွေ၊ ဇာတ်ဆရာတွေတောင် အံ့သြတယ်….။
ကျနော့်စိတ်ထဲမှာတော့ တစ်ခုခုထူးခြားနေတယ်ဆိုတာတော့ မသိစိတ်က ကိုသိနေခဲ့သလိုပါဘဲ….။
ဒါကြောင့် ဒီပို့ စ်လေးကို နာမည်ပေးထားတာ…
ကိုယ့်ဟာကို ဂုဏ်ယူပြီး ပြောရစတမ်းဆိုရင်တော့…..
မြန်မာပြည်မှာ ဘုန်းကြီးပျံရုပ်ကလာပ်က ပန်းကို စွန့် သလိုလို ၊ ဘာလိုလို စကားလှလှသုံးပြီး
ပန်းခိုးခဲ့တဲ့ ဇာတ်မင်းသား က ကျနော်တစ်ယောက်ဘဲ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်..။
ပထမ ဘာပုံလေးမှန်း မသိဘူး။ ဖတ်ပြီးမှ ခေါင်းပေါင်းလေးမှန်းသိတာ။
ရေးထားတာ ကောင်းလိုက်တာ ကိုခေါင်ရေ။ ဒီပုံဆို ပို့စ်တွေ စုပေါင်းပြီး စာအုပ်တောင် ထုတ်လို့ရတော့မယ်။ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်ဆိုတော့ စာတွေကလည်း ရင်ဘတ်ထဲက လာတာဖြစ်နေတယ်။
မပြုံးလည်း ကွန်ပူပျက်နေလို့ ရွာထဲ မရောက်တာကြာပေါ့။ ကိုခေါင် ဆုရတယ် သိရလို့ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ။ ဟိုဘက်ပို့စ်မှာ ရေးရင် မမြင်မှာစိုးလို့ ဒီမှာရေးတာပါနော်။
စုဘူးဖောက်ပြီး မုန့်ဝယ်ကျွေးပါ ဒါဗြဲ။
ပျောက်နေတယ်လို့ စိတ်ကထင်တာ… ကွန်ပူကြီး ပျက်နေတာကိုးးးး။
ဆုရတယ် ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ရွာက မောင်နှမတွေ ပေးလို့ ပါ..။စုဗူးလေးလဲ ရွာက အမှတ်တယ စုဗူးလေးပေါ့..။
မုန့် ဝယ် ကျွေးမှာပေါ့… ပြန်လာတဲ့အခါ..။
ထမင်းဖိတ်ကျွေးနော်..မပြုံး ဟင်းစပ်လေးတွေ ဖတ်ရဘူးတော့ …မျှစ်ချဉ်ဟင်းစားချင်တယ်..။
“ ခင်ဗျား…ခါးပိုက်နှိုက်လား” တဲ့ 
ဟား ဟားဖြစ်ရမယ် ဗျာ…
ပန်း ပြန်ပို့ တဲ့စွန့်စားခန်း လေးလဲလုပ်ပါဦး ဗျ
အေးလေ..လူကိုများ ခါးပိုက်နှိုက်လားတဲ့… ကိုယ့် ကောင်မလေးတွေ ကြား၇င်တော့ ရင်ကွဲမှာ…ခွိ။
ဒါပေမယ့် သူက ကျေးဇူးရှိဒယ်နော် အကို..။
ပန်းက ပြန်ကို မပို့ တော့တာ ဒိလောက် စန်းထပြီး ဆုကျတဲ့ပန်း… အပိုင်ကို သိမ်းလိုက်တော့တာ..။
စွန့် ပြီးရင် ပြန်ကပ်လို့မကောင်းတော့ဘူးလေ…
“ ဆုငွေ တော်တော်ရလား…ဒကာရဲ့ ” ဆို…သေပြီဆရာဘဲ.. သားသား ကြောက်ကြောက်….။
Open-hearted and Open-minded person လို့ ပြောနိုင်တဲ့ လူမျိုး တစ်ယောက် တွေ့ဖူးပြန်ပေါ့။
အဲဒါဆို မုန့် ဝယ်ကျွေး…
ဘာမှ မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်ရင် အုန်းထမင်းချက်ကျွေး..။
နောက်ဆုံး ရလာမှပဲ သက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်။
ကျွန်တော်လဲ တကယ် အပေါ်က ပုံလေးကို နောက်ဆုံးမှပဲ သဘောပေါက်တော့တာ။
ဘုန်းဘုန်းကတော့ ထင်မှာရယ်….. ဒီဒကာ ကတိမတည်ဘူး ဆိုပြီးတော့ ဟီဟိ
ဘုန်းဘုန်း အထင်လွဲမလွဲတော့ မသိဘူး..
ကိုယ်ကတော့ ဇာတ်ကားနဲ့ ပြန်တဲ့အထိ မဏ္ဏပ်ဘက်ကို ယောင်လို့ တောင် လှည့်မကြည့်ရဲဘူးး။
အဖြစ်ကတော့ ငိုရမလို ရယ်ရမလိုဆိုတာလိုပါလား…
ဘုန်းဘုန်းကတော့ ခွင့်လွှတ်မှာပါ…ဒါပေမဲ့ ဒကာရင်းတစ်ယောက်လောက်တွေ့သွားလို့ကတော့
မင်းသားမဏိ ကွမ်းစား သွားမှာသေချာတယ်…
အဲ့ဒါကြောင့် အသာလေး ဘုန်းကြီးခေါင်းတလားအောက်မှာ လှဲချပြီး ပန်းဖြုတ်ခဲ့ရတာပေါ့..ဟေးဟေးး။
တွေ့ သွားရင် လွယ်ဘူးဗျ..တစ်ချို့ က အစွဲကြီးတယ်။
အထဲက ဘုန်းကြီးကတော့..အံတကြိတ်ကြိတ် တောက် တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့
ဗုံဗုံ တို့ များ
ကိုယ့်ဦးလေး တိုင်ပတ်နေတာက်ို သွားဖြီးပြီး ရယ်နိုင်သေးတယ်..
သေသွားတဲ့ တူလေးနဲ့ တိုင်ပြောလိုက်မှာနော်..
ကန့်လန့်ကာကြီးရယ် … နေပါဦး … ကလို့ ကောင်းနေတုန်း …
တစ်ရွာသားလေးရယ် … တီးပေးပါဦး … ဆိုလို့ ကောင်းနေတုန်း …
လက်ခုပ်သံတွေ တီးပါဦး … ရင်ခုန်ပါရစေဦး …
x x x x x x x ပျော်လို့ ရွှင်လို့ မဆုံး ………..
ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး ….
ခညားပို့စ်ကို ဖတ်ပီး ကျုပ်ငယ်ငယ်က ရွာမှာ နံမယ်ဂျီးခဲ့တဲ့ ဇာတ်သီချင်းကို ဆိုလိုက်ဒါ …
ဘုန်းဘုန်းဆီက ခိုး … အဲ .. အဲ .. စွံ့ခဲ့တဲ့ တစ်ပွဲထိုးပန်းက လာဘ်ရွှင်ဒယ်လို့ ဆိုလိုဂျင်ဒါပေါ့ ..
နောက်တော့ရော … အိုက်ဒီပန်း ဘာဖစ်တွားဒဒုန်းး
လွှင့်ပလိုက်ဒါလား .. ဘုန်းဘုန်းဘေးကို ပြန်ထားလိုက်တာလား …
အံဇာ မိုးဝင်းက အဆိုလဲ တယ်ကောင်းပါလား…
နီ့ကောင်မယေး ဘယ်ဒူလဲဆိုတာ နာသိပြီ..လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ရက်လောက်ကမှ စဉ်းစားမိသွားတာ…
ပန်းလေးက လွှင့် မပစ်ပါဘူး…သိမ်းထားတယ်…
နီ နို့ မင်ဂါဆောင်မှာ လက်ဆောင်ပေးဘို့ ..။
တား တောင်မယေး ဘယ်ဒူလဲဆိုဒါ ထုမှတိဒယ် …
အိုက်ဒါဒွေဂျောင့် လပိုဂျီး ဖစ်နေဒါ နေမှာ … ခွစ်ခွစ် …
ခညားဂျီးရဲ့ မင်ဂါ လက်ဆောင်ကို မှတ်ထားလိုက်ဘီနော် …
အိုက်အချိန်ကျမှ မဟုတ်လို့ဂဒေါ့ .. ဟွန့် …
ဟဟ..ကိုမင်းသားရယ်…ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ….ပွဲဈေးမှာ ဘလိတ်ဓါးရှာဝယ်ရတယ်လို့ …ပန်းကို တွားနဲ့ကိုက်လိုက်ပါတော့လား…အဟိဟိ
ရက်ရက်စက်စက်ကို အသည်းမာလွန်းတဲ့ဒူးဝါးလေးပါလား….ဟေ
အဲလို သွားနဲ့ ကိုက်ဖြတ်ရင် …မှန်ခေါင်းထဲက ဘုန်းဘုန်း မျက်နှာတော်နဲ့ ဦးခေါင် မျက်နှာနဲ့ ….အမလေးလေးးးးး။
ဒူးဝါးလေး မသိလို့ နော်..အဲတုန်းက ဆို ဦးခေါင် လက်တွေ ခြေတွေ အေးစက်နေတာ…။
မှောင်ကလည်း မှောင်တာနဲ့ ..။
.“ တစ်ချက်လောက်တော့ လှည့်ကြည့်သင့်ပါတယ်” ဆိုတဲ့ စိုးလွင်လွင် သီချင်းထဲကလို..
ကိုယ့်ဘက်များ မတော်တစ်ဆ ဇက်လည်ပြိးကျလာရင်… အမလေးးး သေနိုင်တယ် ဗျ။
နောက်ထပ် ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းတွေများ ဖတ်ရဦးမလဲ…
အရေးအသားတွေကတော့ရှယ်တွေပါလားကိုမင်းသားရယ်။ ပေါင်းချုပ်ထုပ်ပါလား။ သိမ်းထားပြီးပြန်ပြန်ဖတ်ချင်လို့
မနုအေးက စာအုပ်ထုတ်ဝေသူ လုပ်ပေါ့…။ ထပ်ရေးမယ်လေ။
ဒါပေမယ့် အရေးကောင်းတဲ့ စာရေးဆရာ
ဒါပေမယ့် လက်ရာမြောက်တဲ့ ပန်းချီဆရာ
ဒါပေမယ့် ကဗျာဆရာလည်း ဖြစ်တယ်
အငို သန်သလောက် သိပ်မြှောက်တတ်တာဗြဲ…။
မျက်​စိထဲ​ပြေးမြင်​ပြီး ရယ်​လည်းရယ်​ရတယ်​ ဆရာ​ခေါင်​​ရေ..
အင်း.. တခါတ​လေ​တော့လည်း ဘာမဟုတ်​တဲ့အခက်​အခဲ​လေး​တွေက
ဆရာ​ခေါင်​ စင်​​ပေါ်မှာ ဟဲ​နေစဉ်​အချိန်​ကဆိုရင်​ ကျ​တော်​တို့က
အထက်​က ကွန်​မန့်​​တွေမှာ​ပြောသလိုဘဲ .. ဆရာ​ခေါင့်​စာ​လေး​တွေ သီးသန့်​စုပြီး ထုတ်​လို့ရ​နေပြီ…
ဇာတ်စင်နောက်ကွယ်မှာ..အဲဒါမျိုးလေးတွေ က ခဏခဏ ကြုံရတာ..
စာအုပ်ထုတ်နိုင်တဲ့ အဆင့်ကြီးတော့ ဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ..။
ပွဲခင်းထဲ တိုးတာ…ကောင်မလေးတွေ ကြားထဲ မဟုတ်လား..
အူးခေါင်နဲ့ တူတူ ပန်းခိုး အဲ ပန်းစွန့် ရတာ မောထှာ ။ ရင်ကို ခုန်ရော ။ အူးခေါင်ရဲ့စာတွေကတော့ လွှတ်ကောင်းနေရောပဲ
တူမချောလေးတွေထဲမှာတော့ လုံလုံက အလိမ္မာ ဆုံးဘဲ..။
ဦးခေါင်နဲ့ ပန်းခိုးတာ အဖော်လိုက်ပါလာလို့ …။ တူ တွေ တူမတွေ စာရေးတာ ကောင်းပြီး တော်နေတော့
ဦးခေါင်လည်း နောက်က လိုက်ရတော့တာပေါ့..။
ဒီမှာလည်း ပရိသတ်များနေပြီဆိုတော့ မောရဘူးနော် …..
အနုပညာ မှော်ကဝေ ပန်းချီဆရာရယ်။
မပြုံးပြောသလို စာအုပ်ထုတ် လိုက်ရင် စာပေဆုတောင် ရလောက်တယ်။
အိမ်ပြေး စာပွဲထိုးလေးလို ရွာထဲ ခဏလာပြီး ပြန်ပြေးမသွားပါနဲ့။
ပန်းချီဆရာ ဘဝ နဲ့ ဇာတ်မင်းသားဘဝ ဘယ်ဘဝ ကို ပိုပြီး သဘောကျသလဲ ဆိုတာ သိချင်နေမိရဲ့။
ဒီရွာမှာ ကျနော် တစ်ကယ်ကို ပျော်တာပါ..
အရီးခင်မေးလို့ဖြေရမယ် ဆိုရင်..
ပန်းချီသမား ဘ၀က အေးဆေးနေတတ်တဲ့ ကျနော့်စိတ်နဲ့ အဆင်ပြေပေမယ့် အထီးကျန်သလိုဘဲ..။
မင်းသား ဘ၀ကို တစ်ကယ် ဖြစ်လာတဲ့အခါ… မမျှော်လင့်ထားတဲ့ မေတ္တာတွေ အချစ်တွေ ရလို့ပျော်တယ်..။
ပွဲခင်းလောက် ရင်ခုန်စရာ ကောင်းတာ မရှိဘူး..။
လက်ခုပ်သံတွေ အားပေးမှုတွေနဲ့ အချစ်တွေ ကြားမှာ မေတ္တာငတ်ခဲ့တဲ့ကျနော် အရာရာကို မေ့နိုင်ခဲ့တယ်..။
မင်းသား ဘ၀ကို ပိုခင်တွယ်တယ်..။
ဒါပေမယ့် ပန်းချီပညာက ရေးဆွဲတာ ကြာလို့ အသက်ကြီးလေလေ လက်ရာပိုကောင်းလေ..ပွဲလယ်တင့်လေ။။
ဇာတ်မင်းသားက အသက်အရွယ် ရ လေလေ..ပညာပိုစုံလေ… ဘေးရောက်လေလေ မို့ ။။။
လုပ်သင့်တဲ့ လမ်းကို ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ သဘောပါ..။
အသက်အရွယ်အရ အရွယ်ကောင်းပေမယ့် ဇာတ်သဘင်လောက က အရည်အသွေးကျဆင်းလာလို့မပျော်တော့တာပါ။
(ခေါင် စာအုပ်ထုတ်ရင် အားပေးမယ်။
မမမာ သတင်းပေးလိုက်လို့ ဖြစ်မှပေါ့…
ခု ဘုန်းကြီး လိုက်လာပြီ..ကဲ…
ရပါတယ်လေ…ဘုန်းဘုန်း တပည့်တော် အမက မမမာပါဘုရား သူ့ ဆီမှာ သွားတောင်းပါဘုရားလို့လျောက်လိုက်တော့မယ်။